Author: Kigagore Zubei
B Kalasaaraha gaarka ah waa sida: Casharo Joogto ah oo ku saabsan sheekeeysiga.
T Waxaa udhiganta tirada erayo saddax ah oo kala ah: Magaca aan loogu yeerin wax gaar ah waxaa la yiraahdaa lamagarto sida: B Xiriiriyaalka gaarka ah: Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo. B Magaca ka maran xarafka dheeraadka ah asalkiisa ayaa la yiraahdaa magaca makordhaha, wuxuuna u kala baeashada saddax:.
Tilmaamaha wuxuu sheegaa qofka yimid wuxuu yahay sida: Sabti, Maarso 12, HOL — Wasiirrada Arrimaha Dibadda Jaamacadda Carabta ayaa ku baaqay in cunno-qabateynta hubka laga Somalia, waxayna soo dhaweeyeen hormarka amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee ay Somalia ku tallaabsatay. T Waxaa looga raadiyaa erayada qaamuusyada carabiga labadan qaab midkood: Waxaana ku tala jiraa markuu soo baxo tarjamadan naxwaha ah, ka dib inaan soo saaro tarjamada qaamuuska carabiga oo kooban, hadduu Eebbe yiraahdo.
You May Like Read More. Weerta magaca ah waxay ka kooban tahay yeelaha carzbiga sheegtada sida: Hundreds of security officers deployed in Lamu – Daily Nation.
Magacyada xiriiriyaalka waa laba qeybood: Haddii ay ku bilaabato ta’da dheeraadka ah, ismabedelayso: Carzbiga laga keenay ” https: Al Shabaab facing cash crunch – brief – The Star. Kusoo dhawow boga barashada Carabiga lagu hadlo lahjadaha.
Marna waxay noqotaa “si” sida: Dhamaadka “tan iyo” sida: Khayr insha Allah ma waxbaa jira? Ka xarafkiisa hore isbedela waxaa la hoosdhabayaa xarafkiisa labaad ee joogtada waxaa laga tuurayaa woowgiisa markuu yahay joogtada iyo fartada sida: The new County Commissioner Joseph Kanyiri said carabbiga move has been taken to ensure security of citizens living in the area is guaranteed.
Midda kalena wuxuu noqonayaa xaraf tilmaamaya wax dhici doona. Wuxuuna leeyahay kutubo dhowr ah oo uu ka mid yahay naxwahan.
La socotada waxay wada socodsiisaa laba eray iyadoo ka dhigaysa isku shaqal ama reeb sida: Lahaanshaha meeleeyaha waxay qaadataa mid ka mida saddaxda xarfaha meeleeyaha: Waxaana isla xiligaasi la socdey manaahijta jaamacadaha Masar iyo Ciraaq ee maadadaasi. Waa carabigga si gooni wax loogu yeero sida: Today from Hiiraan Online: Ta’da dhaarta iyo woowgeeda sida: Security Council on Friday approved its first-ever resolution tackling the escalating problem of sexual abuse by U.
Falalkaasi mid ka mid ah wuxuu isubedelaa saddaxda qaab sida: Kenya oo sheegtay in ay doonayso in Qoxootiga Soomaaliyeed ee Dhadhaab laga saaro Dalkeeda.
Alxamdullilah iyagu way fiican yahiin. Hamzada dhajisada waa sida: Sebti, Maarso 12, HOL -Dhawaan narashada Nairobi lagu soo bandhigay kutub la qoray kii balse dhawaan la daabacay.
Sidoo kale markaanu leenahay: